अस्थिपञ्जर छरपस्ट तालको रहस्य – Sourya Online
सौतिक विस्वास २०७७ फागुन १९ गते १३:०० मा प्रकाशित
भारतीय हिमालयस्थित एउटा हिमाली उपत्यकामा रहेको विकट तालमा सयौँ मानव अस्थिपञ्जर छरपस्ट अवस्थामा भेहिएको छ । उत्तराखण्ड राज्यस्थित भारतको एउटा अग्लो हिमाल त्रिशूलको चुचुरोको ठाडो भिरालोमा रहेको रूपकुण्ड समुद्र सतहबाट ५ हजार २९ मिटर उचाइमा छ । ‘अस्थिपञ्जरको ताल’ मा मानव अवशेषहरू छरिएको र हिउँमा दबेको कुरा सन् १९४२ मा नै एउटा ब्रिटिस रेन्जरको गस्तीले पत्ता लगाएको थियो । वर्षको अधिकांश समय हिउँ जमिरहने उक्त तालको आकार मौसमअनुसार घट्ने र बढ्ने गर्छ । हिउँ पग्लिएका बेला अस्थिपञ्जर देखिन्छन् । कहिलेकाहीँ त त्यसमा मासु टाँसिएको र सग्लै रहेको देखिने गरेको समाचारहरूमा आएका छन् ।
अहिलेसम्म त्यहाँ ६ सयदेखि आठ सय जना मानिसको शरीरको अवशेष फेला परेको अनुमान गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति स्थानीय सरकारले त्यसलाई ‘रहस्यपूर्ण ताल’ भन्ने गरेको छ । आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि मानवशास्त्री र वैज्ञानिकहरूले अवशेषको अध्ययन गरेका छन् तर गुत्थी भने अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । तालमा मानव अवशेषहरू छरिएको अवस्थामा भेटिएका समाचार बाहिरिएसँगै धेरैलाई लागेको छ, ती मानिस को हुन्, ? उनीहरूको कहिले मृत्यु भयो ? ती कहाँबाट त्यहाँ पुगेका थिए होला ? तर, त्यसको जवाफ अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन ।
त्यससँग एउटा पुरानो कथा जोडिएको छ । कथा अनुसार भारतीय राजा, उनकी पत्नी र सेवकहरू करिब ८ सय ७० वर्षअघि हिउँको सिरेटोको सिकार भएका थिए । अर्को कथा पनि छ, केही मानव अवशेष सन् १८४१ मा तिब्बत कब्जा गर्न गएका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको हो जसलाई परास्त गरेर भगाइएको थियो । उक्त भनाइअनुसार ७० भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी हिमालयको बाटो हुँदै घर फर्किन बाध्य बनाइए र बाटोमै उनीहरूको मृत्यु भएको थियो ।
एउटा अर्को मान्यताअनुसार त्यो एउटा अन्तिम संस्कार गर्ने स्थल पनि हुनसक्छ जहाँ महामारीका पीडितहरूको अन्तिम संस्कार गरिएको होस् । त्यस क्षेत्रमा पर्ने गाउँहरूमा चर्चित एउटा लोकगीतमा भगवती नन्दादेवीले फलाम जत्तिकै कडा आँधीको सृष्टि गरिन् जसले गर्दा ती मानिस त्यहीँ पुरिए । भारतको दोस्रो अग्लो हिमाल नन्दादेवीलाई भगवतीको रूपमा श्रद्धा गरिन्छ ।
अस्थिपञ्जरबारे यसअघिका अध्ययनहरूले मारिएका अधिकांश मानिसहरू ‘औसत संरचनाभन्दा’ अग्ला रहेको पत्ता लगाएका छन् । धेरैजसो ३५ देखि ४० वर्षका रहेको एवम् शिशु र बालबालिका नरहेको पत्ता लगाइएको छ । केही पाको उमेरका महिला थिए जो सबैको स्वास्थ्य सामान्यता राम्रो थियो । साथै त्यो अवशेष नवौँ शताब्दीमा कुनै महाविपत्तिमा परेर ज्यान गुमाएका एउटै समूहका मानिसको भएको आम मान्यता पनि पाइन्छ । भारत, अमेरिका र जर्मनीका १६ वटा संस्थाका २८ जना सहअध्येताहरू संलग्न पछिल्लो पाँच वर्ष लामो अध्ययनले ती अनुमानहरू सत्य नहुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । वैज्ञानिकहरूले जेनेटिक विश्लेषण र कार्बन डेटेड विधिबाट १५ जना महिलासहित ३८ वटा मानव अवशेषको अध्ययन गरेका थिए जसमा केही १ हजार २ सय सय वर्षअघिका थिए । जसअनुसार मृतकहरू वंशाणुगत रूपमा फरकफरक छन् र मृत्यु पनि एक हजार वर्षसम्मको अन्तरमा भएको छ ।
‘यसले एउटै प्रलयका कारण सबैको मृत्यु भएको मान्यताको खण्डन गरेको छ,’ अध्ययनको नेतृत्व गरेकी हार्वर्ड विश्वविश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिकी विद्यार्थी एडाओइन हार्नीले भनिन्, ‘रूपकुण्डमा के भएको थियो भन्ने अझै अस्पष्ट छ तर एउटा घटनामा सबैको मृत्यु भएको थियो भनेर व्याख्या गर्न नसकिने निष्कर्षमा अब हामी निश्चिन्त भएका छौँ ।’
तर, थप चाखलाग्दो कुरा के छ भने वंशाणुगत अध्ययनले मृतकहरूको एउटा समूह अहिले दक्षिण एसियामा बसिरहेका मानिसहरूसँग मिल्दो देखिन्छ । अर्को समूह अहिले युरोप खासगरी ग्रिकको क्रिट टापुमा बस्नेहरूसँग निकट सम्बन्धित देखिन्छ । अनि दक्षिण एसियालीसँग मिल्ने मृतकहरू पनि एउटै समुदायको भएको देखिन्न ।
‘तीमध्ये केहीको वंश उपमहाद्वीपको उत्तर र केहीको दक्षिणतर्फका मानिसहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ,’ हार्नीले भनिन् । त्यसो भए केही सय वर्षअघि फरक–फरक समूहका मानिसहरू ससाना समूहमा यात्रामा गएका थिए ? तीमध्ये केही एउटै घटनामा मारिएका हुन् ? ताल व्यापारिक मार्गमा पर्दैन र त्यहाँ हातहतियार वा व्यापारिकका कुनै पनि सामग्री भेटिएका छैनन् । वंशाणुगत अध्ययनले कुनै प्राचीन जैविक कीटाणु पनि फेला परेको छैन जसले गर्दा रोगका कारण ती मानिस मारिएको बताउन सकियोस् । मानिसहरू त्यो क्षेत्रमा किन यात्रा गर्दै थिए भन्ने कुरा सम्भवतः तालको बाटोमा पर्ने तीर्थस्थलले जनाउँछ ।
अध्ययनहरूले १९औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म त्यस क्षेत्रमा तीर्थस्थलको विश्वसनीय प्रमाण नरहेको देखाएका छन् । तर स्थानीय मन्दिरहरूका आठौँ र १०औँ शताब्दीको बीचका शिलालेखले सम्भावित तीर्थाटन औँल्याउँछन् । त्यसैले वैज्ञानिकहरूले त्यस क्षेत्रमा फेला परेका केही अवशेषहरू तीर्थाटनकै क्रममा सामूहिक मृत्यु भएकाहरूको हुनसक्ने विश्वास गरेका छन् । तर पूर्वी भूमध्यसागर भूमिबाट कसरी मानिसहरू भारतको अग्लो हिमालस्थित विकट तालसम्म पुगे ? भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ ।
युरोपबाट लामो बाटो हुँदै हिन्दू तीर्थस्थलमा सहभागी हुन रूपकुण्ड मानिसहरू पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । वा वंशाणुगत रूपमा अलग पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्रका पूर्वजका कैयौँ पुस्ता त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएका थिए ? ‘हामी अझैँ पनि जबाफहरूको खोजी गरिरहेका छौँ,’ हार्नीले भनिन् । थाहा छैन उनले त्यसको वास्तविकता कहिले थाहा पाउने हुन र आम मान्छेको मनमा उब्जिएका प्रश्नले चित्तबुझदो जवाफ पाउनेछ । (बिबिसी)